प्रत्येक कारको सानो भागको रूपमा स्पार्क प्लग हुन्छ। जे होस् यो अक्सर तेल फिल्टरको रूपमा प्रतिस्थापन हुँदैन, योसँग निश्चित सेवा जीवन पनि हुन्छ। धेरै साना साझेदारहरूलाई थाहा छैन कसरी स्पार्क प्लगले ईन्जिनको प्रदर्शनलाई असर गर्दछ, न त सानो स्पार्क प्लग परिवर्तन गर्न यसले कति समय लिन्छ।
स्पार्क प्लगले वास्तवमा के गर्छ?
स्पार्क प्लगले वास्तवमा के गर्छ? वास्तवमा, स्पार्क प्लग ईग्निशन उपकरण हो। कम्प्रेस गरिएको ईन्धन विष्फोट जले पछि इन्जिन प्रज्वलित हुन आवश्यक छ। स्पार्क प्लग एक प्रज्वलितकर्ता हो।
कसरी EET स्पार्क प्लग काम गर्दछ
म विश्वास गर्छु कि सबैको भान्छामा ग्यास चुल्ती छ। वास्तवमा, स्पार्क प्लग भनेको हाम्रो भान्साको स्टोभमा इग्निशन जस्तै हो। यद्यपि इञ्जिनको प्रज्वलन बढी सटीक छ। क्षेत्र, आकार र स्पार्कको क्यालोरिफिक मानले दहनको दर निर्धारण गर्दछ र ईन्धन बचत र शक्ति उत्पादनमा निश्चित प्रभाव पार्दछ। त्यसो भए कसरी स्पार्क प्लगले काम गर्दछ? संक्षिप्त शब्दहरुमा, स्पार्क प्लगले दुई ध्रुव बीच एक उच्च भोल्टेज उत्पन्न गर्दछ, विद्युत् प्रवाह उत्पन्न गर्दछ, र त्यसपछि स्पार्क उत्पन्न गर्न डिस्चार्ज गर्दछ।
EET स्पार्क प्लग कति लामो हुनुपर्छ?
स्पार्क प्लगको बिभिन्न सामग्रीका कारण, स्पार्क प्लगका प्रकारहरू सामान्य तामाको कोर, पाना धातु, प्लेटिनम, रोडियाम, प्लेटिनम-इरिडियम मिश्र धातु स्पार्क प्लगहरू र अन्यमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यस प्रकारको स्पार्क प्लगहरूको सेवा जीवन फरक छ, र सम्बन्धित प्रतिस्थापन माइलेज पनि फरक छ। यो छनौट गर्दा स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्दछ।
प्लेटिनम स्पार्क प्लग ,000०,००० किमीबाट 50०,००० किमीमा बदलियो
स्पार्क प्लगमा दुई इलेक्ट्रोडहरू छन्। प्लेटिनम स्पार्क प्लगहरूले केन्द्र इलेक्ट्रोडको रूपमा प्लेटिनम प्रयोग गर्दछ। यो नाम यस द्वारा निर्धारण गरिएको छ। यो लामो सेवा जीवन र राम्रो स्थायित्व द्वारा विशेषता हो, जुन मूल रूपमा ,000०,००० किलोमिटरबाट 50०,००० किमीमा परिवर्तन हुन्छ।
Double०,००० किलोमिटर वा डबल प्लेटिनम। यदि यो डबल प्लैटिनम हो भने, यो केन्द्र इलेक्ट्रोड र छेउ इलेक्ट्रोड हो। यो प्लेटिनम छ। उत्तम प्लेटिनम स्पार्क प्लग हो।
मैले भर्खरै भने प्लेटिनम र डबल प्लेटिनम। तपाईंले विशिष्ट टेक्नोलोजीको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। जे भए पनि, साधारण प्लैटिनम 30०,००० देखि ,000०,००० किलोमिटरको हिसाबले, र डबल प्लैटिनम 80०,००० किलोमिटरको आदानप्रदान हुन्छ।
EET इरिडियम स्पार्क प्लगहरूले १०,००,००० किलोमिटर प्रयोग गर्दछ।
त्यसो भए स्पार्क प्लग राम्रो हुन्छ, मूलत: १०,००,००० किलोमिटर प्रयोग गर्नु ठूलो समस्या होइन।
कसरी तपाईं कसरी स्पार्क प्लग बदल्न आवश्यक छ भनेर निर्धारण गर्ने?
१, हेर्नुहोस् यदि इन्जिन सामान्य रूपमा सुरू हुन सक्छ
चिसो कार सजिलै सुरु भयो कि हेर्नुहोस्, त्यहाँ स्पष्ट "निराशा" छ कि छैन र यसलाई सामान्य प्रज्वलित गर्न सकिन्छ कि छैन।
२, ईन्जिन शेक हेर्नुहोस्
कार सुस्त गरौं। यदि ईन्जिन सहज रूपमा चल्छ भने, स्पार्क प्लग सामान्य रूपमा काम गर्न सक्दछ। यदि ईन्जिन बीचमा वा निरन्तर कम्पन र एक असामान्य "अचानक" ध्वनी पाइएको छ भने, स्पार्क प्लग समस्याग्रस्त हुन सक्छ र स्पार्क प्लग बदल्न आवश्यक पर्दछ।
,, स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड खाली ठाउँ जाँच गर्नुहोस्
जब तपाईं स्पार्क प्लग हटाउनुहुन्छ, तपाईं स्पार्क प्लगमा डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड भेट्टाउनुहुनेछ, र इलेक्ट्रोड सामान्यतया खपत हुनेछ। यदि अन्तर एकदम ठूलो छ भने, यसले एक असामान्य डिस्चार्ज प्रक्रिया (स्पार्क प्लगको सामान्य निकासी १.० - १.२ मिमी) निम्त्याउँछ, जसले इन्जिन थकानको कारण दिन्छ। यस बिन्दुमा, यो प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ।
The. र observe्ग अवलोकन गर्नुहोस्।
(१) यदि रातो खैरो वा खिया छ भने, स्पार्क प्लग सामान्य हुन्छ।
(२) यदि यो तेल हो भने यसको मतलब स्पार्क प्लग फाँट असंतुलित छ वा तेलको आपूर्ति धेरै नै छ, र उच्च भोल्टेज लाइन छोटो सर्किट वा खुला सर्किट हो।
()) यदि यो कालो धुम्रपान गरिएको छ भने, यसले स the्केत गर्दछ कि स्पार्क प्लग तातो वा चिसो छ वा मिश्रण धेरै धनी छ, र ईन्जिनको तेल बढ्दो छ।
()) यदि टिप र इलेक्ट्रोडको बीचमा निक्षेप छ, र निक्षेप तेल छ भने, यो सिलिन्डरमा रहेको तेल स्पार्क प्लगबाट स्वतन्त्र छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। यदि निक्षेप कालो छ भने, स्पार्क प्लगले कार्बन डिपोजिट गर्दछ र यसलाई बाइपास गर्दछ। निक्षेप खैरो छ किनकि पेट्रोलमा इलेक्ट्रोड ढाक्ने योजकले आगोको कारण गर्दैन।
()) यदि स्पार्क प्लग गम्भीर रूपमा एब्लेट गरिएको छ भने, स्पार्क प्लगको शीर्षमा स्क्र्याचहरू, कालो रेखाहरू, क्र्याकहरू, र इलेक्ट्रोड पग्लिनेछन्। यसले संकेत गर्दछ कि स्पार्क प्लग बिग्रिएको छ र तुरुन्तै बदल्नु पर्छ।
स्पार्क प्लगले गाडीको शक्तिलाई असर गर्छ, तर यसको मतलब यो होइन कि अधिक मूल्य, गाडीको प्रदर्शन राम्रो हुन्छ। राम्रो स्पार्क प्लगले कारको गतिशील प्रदर्शनमा योगदान पुर्‍याउँछ, तर कोहीले यो धेरै मद्दतको आशा गर्न सक्दैन। गतिशील प्रदर्शनको साथ स्पार्क प्लगको मद्दत पनि इन्जिनमा निर्भर गर्दछ। यदि ईन्जिन प्रदर्शन एक निश्चित "स्तर" मा पुग्न छैन, एक अधिक उन्नत स्पार्क प्लग स्थापना गर्नाले डाईनामिक प्रदर्शन धेरै सुधार गर्दैन। त्यसकारण अन्धाधुन्ध रूपमा उच्च मूल्यको स्पार्क प्लगहरूको पछि नहट्नुहोस्।
स्पार्क प्लगको जीवन छोटा पार्ने तत्त्वहरू के हुन्?
१. पेट्रोलको गुणस्तर राम्रो छैन। तपाईं प्रायः केही निजी र घट्न सक्ने साना ग्यास स्टेशनहरूमा जानुहुन्छ ईन्फिल गर्न, न्यून परिणामको रूपमा। यो सबैभन्दा हानिकारक हो।
२. सवारीहरू भारी बोझ अन्तर्गत लामो समयसम्म काम गर्दछन्, प्राय: मानिसहरूसँग भीड, अधिक भार पनि, अक्सर भारी वस्तुहरू तान्ने र व्यापारमा ट्रकको रूपमा प्रयोग हुने।
Violent. लगातार हिंसात्मक ड्राइभि driving र फ्लोर तेलको लगातार प्रयोग।
H. सडकहरू खराब सडकहरूमा यात्रा गर्दछ, जस्तै निर्माण साइटहरू, हिमाल सडकहरू, र हिलो सडकहरू। यी सबै कारकहरूले छोटो स्पार्क प्लग जीवन र पहिलेको प्रतिस्थापन चक्र निम्त्याउन सक्छ। यदि कार उच्च गतिमा चलिरहेको छ वा राम्रो अवस्थामा, प्रतिस्थापन चक्र एक ढिला ढिलाइ हुन सक्छ।
किन स्पार्क प्लगको समान प्रकार प्रयोग गर्नुहोस्?
चिनो स्पार्क प्लगले इग्निशन अन्तराल, लम्बाइ, इत्यादि अनुसार निर्धारित गरिन्छ, स्पार्क प्लगको इग्निशनले सिधा शक्तिलाई असर गर्छ। पहिले यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि चार स्पार्क प्लगको इग्निशन क्षमता उस्तै हो। यदि पुरानो र नयाँ फरक छन् भने, इन्जिनको आउटपुट शक्ति असंगत र असंतुलित हुनेछ, इन्जिन कम्पन र अन्य घटनाहरूको कारण।